Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Traikefa dimy velona amin'ny IMEX America
Ireto misy traikefa dimy tokony harahi-maso ao amin'ny Sands Expo vantany vao misokatra ny fanontana 2018 an'ny IMEX America.
Ireto misy traikefa dimy tokony harahi-maso ao amin'ny Sands Expo raha vantany vao misokatra ny fanontana 2018 an'ny IMEX America, manomboka amin'ny Alatsinainy Smart, ny 15 Oktobra. Ny bonanza fandraharahana feno amin'ny seho ara-barotra dia manomboka amin'ny 16 -18 Oktobra.
Ny fikarohana natao vao haingana nataon'ny MPI Outlook ho an'ny vondrona IMEX dia nampiseho fa mihoatra ny roa ampahatelony (69 isan-jato) amin'ireo mpanomana hetsika no manantena ny hampiditra singa traikefa amin'ny fivorian'izy ireo sy ny fivoriamben'izy ireo manomboka izao, ary misy drafitra 16 isan-jato fanampiny hanampy azy ireo amin'ny herintaona na roa. Ho an'ireo 5 isan-jato manantena ny hampiditra azy ireo ao anatin'ny telo taona na mihoatra, ny IMEX America dia mety hanaporofo fa tara loatra izany; Ny andrasan'ny mpanatrika dia avo kokoa noho ny hatramin'izay ary tsy mitsaha-mitombo isan'andro, atosiky ny traikefa miavaka miavaka ankehitriny izay misy ao an-trano sy any am-pilalaovana.
1. Ny Karnavaly MPI: Vaovao amin'ity taona ity ao anatin'ny Smart Monday izay ampandehanan'ny Meeting Professionals International (MPI), ny 15 Oktobra dia karnavaly amerikanina. Miaina mpanao majia, juggler ary artista, fanaka LEGO, tsanganana balloon ary lalao karnavaly. Ity alatsinainy majika ity dia mametraka herinandro mandritra ny herinandro mahery.
2. C2 Learning Labs: Ny mpiara-miombon'antoka vaovao indrindra an'ny IMEX Group, C2 International, izay mpitarika lohalaharana amin'ny kaonferansa fandraharahana, dia mandrava ny sakana amin'ny famoronana miaraka amin'ireo Learning Labs. C2 dia napetraka hampihetsika ny saina ary hanakorontana ny fisainana mahazatra. Ny ekipa C2 koa dia hanolotra Masterclass - 'Emotions and Technology: An Exploration of Audience Connection' - ao anatin'ny andiany MPI Keynote amin'ny 08:30 maraina amin'ny Alakamisy.
3. Faritra mivantana IMEX: santionany amin'ny tsindrim-pifandraisana azo tsapain-tanana amin'ny fiainana hetsika mivantana. Ny Zone Live dia ho fonenan'ireo saribakoly goavambe, finday, zipline VR, sarisary nomerika, mpanakanto, juggler, rindrina majika majika ary rindrina velona. Ireo hevitra ireo, ny sasany kely ary ny sasany mahery, dia azo alamina mora amin'ny endrika hetsika nentin-drazana.
4. Faritra Tech IMEX: Toerana fanandramana vaovao ho an'ny teknolojia hetsika vaovao izy ity, izay ahafahan'ny mpividy manandrana vokatra sy hevitra vaovao entin'ny fampisehoana ataon'ireo orinasa teknolojia vaovao na ho avy.
5. Ny rindrin'ny lova: ho an'ny tantara mampihetsi-po sy mampihetsi-po ary fandalinana tranga avy amin'ny fampiratiana, mpanatrika, mpiara-miasa ary mpiasa ao amin'ny IMEX. Ity rindrina tsotra ity dia mametraka ny IMEX Talking Point - Legacy - amin'ity ivon'ny fampisehoana ity. Fanandramana analogue tsara sy taloha.
jereo Eto ho an'ny lisitra feno ny fotoana famoronana sy traikefa azo alaina ao amin'ny IMEX America 2018.
Ny IMEX America dia atao ny 16 - 18 Oktobra ao amin'ny Sands® Expo sy Convention Center ao amin'ny The Venetian® | Ny Palazzo® any Las Vegas, nialohavan'ny Smart Monday, notarihan'ny MPI, tamin'ny 15 Oktobra.
Maimaimpoana ny fisoratana anarana.